Toerana filokana an-tserasera Portiogey - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(352 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ...Amin'ny Janoary 2018, ny endrika miloka rehetra dia ara-dalàna any Portiogaly. Gambling Regulator Portugal - Serviço Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), tompon'andraikitra amin'ny sehatra filokana rehetra ao amin'ny firenena, tafiditra ao anatin'izany ny casinos sy ny filokana an-tserasera. Mariho ihany koa ho an'ireo mpitsidika ny lahatahiry filokana amin'ny Internet fa ny filokana malaza indrindra eto amin'ny firenena, mazava ho azy, dia ny loteria. Ankafizo koa ny fahombiazana lehibe sy ny filokana amin'ny filokana.
Anarana amin'ny filokana ao Portiogaly
Any Portugal, ara-dalàna ihany koa ny karazana filokana amin'ny Internet. Ny lalàna Portiogey dia filokana mifanaraka amin'ny fenitra eropeana tokoa ny filokana amin'ny Internet, amin'ny fanekena ny tsena malalaka amin'ny fanomezana filokana maro karazana. Ny lalao casino an-tserasera, ny poker an-tserasera ary ny filokana amin'ny fanatanjahan-tena an-tserasera dia malaza be amin'ny mponina ao amin'ny firenena.
Lisitr'ireo Topn'ny Top Casino amin'ny 10 Online Casino
Sites misy casinos amin'ny aterineto izay manaiky mpilalao avy any Portugal
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Portugal, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao casino mivantana amin'ireo mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mamaky ny fanadihadinay momba ny tranonkala kazinina ao amin'ny aterineto, mba hahafantaranao ireo fampiroboroboana tsara indrindra amin'ny Internet, bonus sy safidy azo vidiana ho an'ireo mpilalao avy any Portugal.
Portugal - dia ny ranomasina sy ny baolina kitra, divay ary toetr'andro tsara. Tonga eto izy ireo handany fialan-tsasatra mahafinaritra, nefa koa hiditra ao amin'ny lavaka mangitsokitsoka amin'ny iray amin'ireo trano filokana lehibe indrindra any Eropa. Ny fijanonany manaraka CasinoToplists dia manao Lisbon taloha sy tsara tarehy - renivohitr'i Portugal.
Portugal - izay misy tantara kely ihany koa;
Ny banky any an-tanindrazana dia ara-dalàna;
ivelan'ny tanàna lehibe;
Sarimihetsika amin'ny aterineto amin'ny 2003 ka hatramin'ny 2012 ny orinasam-pandraharahana ao an-toerana Santa Casa de Misericordia de Lisboa;
avy amin'ny 2012 ny fidirana amin'ny mpandraharaha iraisam-pirenena.
Dimanjato dimy ao Lisbonne, renivohitr'i Portogaly misy adiresy;
Zava-baovao mahaliana momba an'i Portiogaly sy ny mponina.
Toerana misy an'i Portiogaly sy tantara ara-tantara fohy
Amin'ny ankapobeny, ny fianarana ny sehatry ny filokana ao amin'ny firenena dia hanomboka amin'ny fampidirana ny fanjakana, ny rafitra sy ny endri-javatra.
Na dia nonina talohan'ny androntsika aza ny olona any amin'ity faritra ity any Eropa, raha ny tena izy, ny tandrefana indrindra, dia napetraky ny fanjakana portogey tamin'ny taonjato faha-XI. Mba hitrangan'izany dia niaina ny herin'ny Lusitanian, Roman, Visigoths ary Arabo ny mponina amin'ny ilany andrefan'ny Saikinosy Iberia. Avy amin'ny fanjakana espaniola misaraka manjavozavo - Portugal, mpikambana iray hatreny amin'ny faritra EU sy Schengen.
Ankehitriny, i Portugal dia repoblika parlemantera izay onenany olona manodidina ny 11 tapitrisa. Ireto misy fiteny ofisialy 2 - Portiogey sy miransky. Ny filoham-panjakana dia ny filoha, amin'ny 2014 dia mibodo an'i Aníbal Cavaco Silva io toerana io.
Ny kontinanta Portugal dia mizara ho distrika 18, ary ny firenena dia an'ny faritra mizaka tena 2 - Madeira sy Azores.
Casino sy filokana ao Portiogaly
Ny filokana ny olona manana tebiteby manokana dia an'i Portiogaly, satria ny casino any, betsaka amin'izy ireo, noorin'izy ireo tsara tarehy ary manolotra fahafahana maro hifalifaliana.
Toy ny any amin'ny firenena eropeana rehetra, ny hetsika filokana rehetra dia tantanan'ny fanjakana ary voafehy fatratra. Tsy ny fanokafana sy fikojakojana ny casino ihany no tafiditra ao, fa ny filokana rehetra. Ny mponina eo an-toerana dia te hampiakatra ny haavon'ny adrenaline ao anaty rà, eo amin'ny casino izy ireo toy ny mpizahatany ihany. Ny tompon'ilay trano filokana miaraka amin'ny fahatahorana dia mifandraika amin'ny vahiny, satria na eo aza ny hetra mampandeha azy ireo dia mahazo valiny tsara.
Nandritra ny nilalaovany tany Portugal, dia toa tamin'ny fiandohan'ny fotoana dia nanomboka nisokatra tamin'ny taonjato faha-XIX ireo andrimpanjakana manampahaizana manokana. Ny trano filokana voalohany dia nosokafana tao Fuzheyra da Foz - tanàna mahafinaritra sy tsara tarehy. Saingy ny fananganana filokana mihitsy dia niasa milamina mandra-pahatongan'ny fanovana fahefana, taona vitsivitsy monja.
Ny fahefana vaovao rehefa mandeha ny fotoana dia nampiseho ny tsy fivadihana izay nahatonga ny poker, ny roleta ary ny milina fantsom-pifandraisana ho tonga, na aiza na aiza. Tsy apetraka ny fameperana manokana amin'ny fikambanan'ny faritany, ka nanomboka nisokatra ny trano filokana amin'ny tanàna samihafa. Ny voalohany dia nitondra ny batony tany Espinho sy Povoa de Varzim.
Rehefa ny fahefana indray ary nosoloina teo amin'ny familiana dia lasa António Salazar dia nahazo trano filokana 2 hafa. Amin'izao fotoana izao, ny toerana misy ny eritreritra manokana. Kasino iray mihazakazaka eo amin'ny Madeira mahafinaritra, iray hafa - any Estoril, saika ao Lisbonne. Avy any afovoan-drenivohitra mankany amin'io rafitra maoderina io ihany no 15 km , mba hahafahan'ny mponina sy ny mpitsidika mankafy ny tanàna lehibe amin'ny fotoana rehetra. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ihany koa dia 15 km fotsiny .
Ny Casino dia nantsoina tamin'ny anarana hoe distrika - ” Estoril ". Ny toerana mety dia nitondra fahombiazana ho azy. Ny toerana dia tena tsara tarehy satria eo amoron'ny Helodrano Cascais no misy azy. Faritany voakarakara sy mihaja, ary manana ny lalao sy fialam-boly fialam-boly.
Etsy ankilany, ny "Estoril" ny trano filokana lehibe indrindra dia tsy any Portiogaly ihany fa any Eropa ihany koa. Ny mpankafy fatorana dia liana hahafantatra fa ity dia iray amin'ireo toerana ankafizin'i Ian Fleming. Nanamafy izy fa teraka eto ny heviny hanoratra novela "Casino Royale". Ka ny fahatongavan'ireo andiana mpitsikilo James Bond ary izay rehetra aloantsika dia amin'ny filokana Portiogey.
"Estoril" dia manana fiaramanidina manokana, ary koa galeriana kanto. Momba ny faritry ny casino isan-taona ny fetiben'ny sarimihetsika dia atao amin'ny Novambra. Mandritra ny taona dia misy ny kintana amin'ny sehatra manerantany, mandray kaonseritra jazz, mozika mivantana ary mihira amin'ny fiteny maro. Ity misy fifaninanana poker.
Lalao amin'ny aterineto any Portiogaly
Real casino any Portugal ary misy safidy virtoaly. Nanomboka tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 2012 dia an'ny Santa Casa de Misericordia de Lisboa ihany no manana ny ampihim-pahefana.
Saingy tamin'ny 2012, nanokatra ny sisintany ho an'ny mpandraharaha vahiny ny governemanta. Tamin'ny 2014, nahazo marika fanta-daza maro ny fahazoan-dàlana, mba hahafahanao milalao ara-dalàna tsy hiala noho ny solosaina, solosaina finday na finday.
Tranon'i St. George . Adiresy: Rua de Santa Cruz do Castelo, 1100-129 Lisboa. Ivon-toerana manan-tantara ao Lisbonne izy io, trano mimanda voatahiry tsara, izay tsy hita na aiza na aiza misy ny renivohitra. Ny singa tranainy indrindra amin'ny fiarovana dia natsangana tamin'ny taonjato VI. Hatramin'ny taonjato faha-XII dia toeram-ponenan'ny emira Moorish izy io.
Ny Mozea Calouste Gulbenkian . Adiresy: Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa. Magnateo manokana momba ny menaka fanangonana avy amin'ny fiaviana Armeniana, ampitaina amin'ny Fanjakana, i Bole dia ahitana zavakanto 6000. Ho fanampin'ny fanangonana sary hosodoko dia fanaka fahagola, sarivongana, firavaka, seramika fahagola ary asan'ny zavakanto ampiharina.
Lisbon Oceanarium . Adiresy: Esplanada Dom Carlos I, s / n, 1990-005 Lisboa. Ao amin'ny trano tany am-boalohany, mitovy amin'ny mpitatitra eo amin'ny seranan-tsambo, dia afaka mahita karazan'olona mponina an-dranomasina mihoatra ny 450 ianao.
Santa Justa Lift . Adiresy: Rua do Ouro, 1150-060 Lisboa. Niakatra ity ascenseur ity, nanomboka tamin'ny 1902, mamela anao hiarina sy any amin'ny faritra iva Baishi any Chiado avo.
Tilikambon'i Belém . Adiresy: Avenida Brasília, 1400-038 Lisboa. Fort XVI taonjato, voatahiry tsara ary iray amin'ireo trano tantaram-pitiavana indrindra eto an-drenivohitra. Ny tilikambo dia mijoro eo amin'ny nosy reniranon'i Tagus ho fanomezam-boninahitra ny fisokafan'ny zotra mankany India an'i Vasco da Gama.
Zavatra mahaliana momba an'i Portiogaly sy Portiogey
Portogey Matriarchal portogey.
Fivavahana lehibe - Katolika (96%).
Portiogey - mpankafy baolina kitra mafana fo, klioban'ny baolina kitra isaky ny tanàna, na amin'ny kely aza.
Ny fiteny Portiogey dia manana sata ofisialy ao amin'ny firenena 9.
Any Portiogaly, misy fitsipika tena henjana momba ny làlana.
Manana fitsaboana tena goavana tokoa ny firenena.
Portiogey - olona mahatsikaiky sy falifaly tokoa, tia ny vazivazy sy vazivazy izy ireo, saingy somary tsy mahalala fomba. Tsy omem-boninahitra ny vazivazy anglisy malefaka.
Ny 90% amin'ny mponina Portiogey dia portiogey.
Ny roa ampahatelon'ny mponina dia mipetraka amin'ny morontsiraka.
Lisbonna ain'olona 2 tapitrisa. Rehefa mponina 11 tapitrisa ny firenena.
Ny anarana malaza indrindra any Portugal - Joao Maria ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy.
Ny antsasaky ny mponina dia iray amin'ireo anarana 7: Silva Ferreira, Santos Oliveira, Pereira, Rodriguez Costa.
Ny anarana Portiogey dia misy teny 4: anarana manokana 1 sy 2, ny anaran'ny mom sy ny dadany.
Portugal amin'ny sarintany Eoropa
0.1 Anarana amin'ny filokana ao Portiogaly
0.2 Lisitr'ireo Topn'ny Top Casino amin'ny 10 Online Casino
2.1 Sites misy casinos amin'ny aterineto izay manaiky mpilalao avy any Portugal
3 Gambling in Portugal
3.0.1 Toerana misy an'i Portiogaly sy tantara ara-tantara fohy
3.1 Casino sy filokana ao Portiogaly
3.2 Lalao amin'ny aterineto any Portiogaly
3.2.1 Lisbon Attractions
3.2.2 Zavatra mahaliana momba an'i Portiogaly sy Portiogey
3.2.3 Portugal amin'ny sarintany Eoropa
tranonkala mifidy an-tserasera tsara indrindra